1. Ungasinciphisa kanjani isisindo sobuso Kubalulekile ukusiza ubuso bethu bubukeke buncane futhi bunomumo, kanye nomnyango oya enhliziyweni otshela abantu abaseduze kwakho ukuthi uzinakekela kangakanani. Abantu abaningi bazama ukuthola indlela yokwehlisa isisindo sobuso esisebenzayo. Kepha kuze kube yileso sikhathi!?! Ubuso obuvuvukile, ubuso obuyindilinga, izihlathi ezikhuluphele, i-neck wattle izohlala nathi isikhathi eside. Kuze kudale ukukhathazeka kwabesifazane Ngubani ofuna ukunciphisa isisindo sobuso kancane Kepha namuhla ngingakutshela lokho Wazi kuphela ukuthi unganciphisa kanjani ubuso bomzimba (Indlela yokwehlisa ubuso) obuletha namuhla. Ubuso bakho buzokuba mncane Kuze kube nguwe uqobo ungabona
2. Nciphisa ukusetshenziswa kwama-carbohydrate alula afana nelayisi elimhlophe, ushukela ocwengekile, ukudla okulula, u-ayisikhilimu, njll, kanye nokudla okusetshenzisiwe. Okuzoqukatha izinga eliphezulu le-sodium Kubangela i-edema emzimbeni nasemzimbeni Noma ngubani ozolahlekelwa isisindo sobuso ngokudla i-carb ephansi (Ukudla okuphansi kweCarbs) ukunciphisa ukudla okuphezulu kwe-carb. Futhi jikela ekudleni okune-carb ephansi kuphela izinsuku eziyi-14 zilandelana, sizoqala ukubona imiphumela yokwehla kwesisindo sobuso ngokucace kakhudlwana.
3. Vivinya zonke izitho zomzimba Umthetho wesithupha wokwehlisa isisindo sobuso ukuncibilikisa amafutha amaningi ebusweni bakho. Esingakunciphisa isisindo sobuso ngemisebenzi edonsa amandla kumafutha amaningi Ngokuvivinya umzimba okuqhubekayo imizuzu engu-15 kuya phambili Ngesilinganiso senhliziyo sokushaya okungu-130-150 ngomzuzu, okuzosiza ukushisa amanoni omzimba nezihlathi ngokweqile. Lapho kwenziwa cishe izinsuku ezingama-30 ezilandelanayo ngokuhlangana nokusetshenziswa kwama-carbohydrate alula. Izosisiza ukuthi sinciphise isisindo sobuso ngempumelelo.
4. I-Yoga yeFat Fat Fat Burning Cheek Fat Kuyindlela elula kakhulu yokwehlisa isisindo sobuso. Senza nje umlomo, o-dick, izihlathi nezindebe. Bese utshekisa ikhanda lakho emuva. Ngokwelula intamo nesilevu, ukubheka ophahleni ngokwenza imizuzu eyi-10, izikhathi eziyi-15 nsuku zonke, ekuseni nangaphambi kokulala izinsuku ezingama-30 ngokuqhubekayo, kuzosiza ukunciphisa isisindo sobuso kakhulu.
5. Ukuqinisa ukubhucungwa umzimba Le ndlela yokwehlisa isisindo sobuso. Sisebenzisa nje inqubo yokuhlikihla ebusweni ehlangene nokhilimu ekuseni nesikhathi sokulala. Vele usebenzise ukhilimu amaphuzu amahlanu abalulekile ebusweni amabunzi, izihlathi, ikhala, isilevu bese usebenzisa zombili izithupha esilevini. Khomba futhi ubeke amathempeli ezinhlangothini zombili. Bese usebenzisa isithupha sakho kancane kancane Usihlanganise sibe umumo ongu-V. Ngemuva kwalokho, lapho ifinyelela ezihlathini, ibhucunga kakhulu kuze kube sebunzini. Bese usebenzisa isithupha sakho kancane kancane Massage kuze kube sezinweleni. Le ndlela inqubo efuna ukuthi sifudumele izihlathi. Ukusiza ukuqinisa imisipha yesihlathi nokusiza ukunciphisa isisindo sobuso.
6. Unganciphisa kanjani isisindo sobuso, siletha namuhla. Akunzima kangako, akunjalo? Noma ngubani onezinye izindlela ezinhle, ungakhohlwa ukuhlebela ukutshela omunye nomunye. Hmph !! Ngoba sizolahlekelwa isisindo sobuso ndawonye ^^ hehe ^^